छोरीलाई डोलीमा चढाएर बिदाइ गर्ने बेला, बासको खटमा राखेर घा’टमा लानु पर्दा घरमा चल्योरुवाबासी ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
छोरीलाई डोलीमा चढाएर बिदाइ गर्ने बेला, बासको खटमा राखेर घा’टमा लानु पर्दा घरमा चल्योरुवाबासी !
नायिका महिमा सिल्वालको घरमा हेर्नुहोस् , दिदि बहिनीको भयो एकै चिहनसवारी दु’र्घटनामा परी नायिका महिमा सिलवालको नि’धन भएको छ। काठमाडौं बाट चितवन जानेक्रममा उनी सवार बा ९८प ७०५८ नम्बरको स्कुटर लाई लु २ ख १३५ नम्बरको बसले ठ’क्कर दिँदा सिलवालको नि’धन भएको थियो । दु’र्घटनामा ग’म्भीर घा’इते भएकी उनकी बहिनी सर्मिलाको पनि ज्या’न गएको छ ।
तवन जिल्लामा बहिनीको ‘इन्गेजमेन्ट’ मा जान लागेको बेला दु’र्घटना भएको थियो। बहिनीको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने क्रममा बाटोमै नि’धन भएको प्रहरीले जनाएको छ । घ’टना बुधबार साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा गजुरी गाउँ पालिका, वडा नम्बर २ चाम्बासमा घटेको हो । प्रहरी निरिक्षक पाण्डेका अनुसार घुम्ती क्रस गर्ने क्रममा स्कुटी र बस एकआपसमा ठो’क्किएका हुन्।
उनले बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । भरतपुर महानगर पालिका–१२ शिवनगरकी अभिनेत्री महिमा सिलवालले एक दर्जनभन्दा बढी फिल्म र दर्जनौं म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन् । ‘का’रवाही’ फिल्मबाट अभिनेत्री को रुपमा डेब्यू गरेकी उनले ‘जिगोलो’, ‘अप्रिल फूल’, ‘दानव’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
उनी अभिनीत अझै आधा दर्जन फिल्म प्रदर्शनको पखाईमा छन्। जुन घरमा केहि दिनमा बहिनीको बिवाह हुँदै थियो आज त्यहि घरमा दुइ छोरिको नि’धन भएको छ । एउटा छोरी लाई डोली चढाएर पठाउन लाग्दै गर्दा दुइ छोरी लाई बासको खटमा राखेर घा’ट लानु पर्दा परिवार त शो’कमा त थियो नै पुरै सिंगो बजार पनि शो’कमा थियो । onlinetvnepalसहयोगमा